200 qof oo isku wareejisay masaajid ku yaala Norway | Somaliska
Iyadoo ay maalmahaan socotay olole laysku wareejinayo kaniisadaha Yuhuuda oo ay sameynayaan dad Muslimiin ah, ayaa hada waxaa bilaabatay in Masaajida laysku wareejiyo. Masaajidka Central Jamaat Ahle Sunnat oo ku yaala magaalada Oslo ayaa shalay sabtidii waxaa isku wareejiyay 200 qof oo la sheegay in ay taageero u muujinayaan difaaca Masaajida Muslimiinta, taasoo la mid ah midii laga sameeyay kaniisada Yuhuuda ee ku taala magaalada Oslo.
Marianne Arvanitidis oo ka mid ahayd dadkii soo qabanqaabiyay ololaha ayaa sheegtay in ay muhiim tahay in taageero loo muujiyo dhamaan diimaha kala duwan. Dadka ayaa isugu soo baxay masaajidka hortiisa iyadoo uu roob da’ayo oo qaboow jiro. Dadka soo qabanqaabiyay dhacdadaan ayaa sheegay in ay doonayaan in ay Muslimiinta u muujiyaan in ay ka midyihiin shacabka Norway isla markaana aysan masuul ka ahayn dhacdooyinka kooxaha hubaysan ay ka samaynayaan wadamada kale.
Laanta Socdaalka oo soo daabacday macluumaad Af-soomaali ku qoran
Asxaabeey islaamku Maahan minority sida yahuuda iyo Diimaha kale sidoo kale Gaal mar walba waa gaal Difaacna kama sugaayo
Alahu Akbar walee waa yaab runtii afkii baa juuqda gabay hadii nin walba wuxuu rabo sheego ha la is imtixaamo diinta islamka iyo sunahii rasuulka scw ayaa qabo wixii ka dheer waa dulmi
Förlåt ixtiraam ayan ka wadaa